Momba anay - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Masinina misy ranomandry
evaporator ranomandry flake
Masinina misy ranomandry flakes
Masinina ranomandry Tube
Mpanao ranomandry ara-barotra
Masinina ranomandry maloto
Sakano ny milina ranomandry
Lasitra ranomandry baolina
Lasitra ranomandry diamondra
Lasitra ranomandry goba
Lasitra ranomandry karandoha
Masinina fonosana gilasy
Efitra misy ranomandry
Hita i Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd. tamin'ny taona 2006. Nifantoka tamin'ny fanatsarana ny teknolojia milina ranomandry izy hatramin'ny fotoana, anisan'izany ny milina ranomandry flake, milina ranomandry fantsom-boaloboka, masinina misy ranomandry sns.
Izahay dia manao asa tsara amin'ny OEM / ODM ho an'ireo evaporator ranomandry flake, masinina fikosoham-bary, milina fantsom-boaloboka, milina fanakodia. Ny vokatray dia raisin'ireo mpiara-miombon'antoka miasa manerantany aminay.
Teknolojia milina fanosotra flake:
Izahay dia manamboatra evaporator ranomandry flake any Shina, ary mivarotra etona etona amin'ny flake any amin'ny ankamaroan'ny orinasan-dranomandry sinoa hafa izahay, izay mampifandray ireo evaporator Herbin miaraka amin'ireo vatan-kafisiny manokana mba hahatonga ny milina fanodinam-boalavo turnkey any amin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao.
Maherin'ny 60% ny milina ranomandry flakes sinoa no miaraka amin'ireo evaporatoran'ny ranomandry Herbin.
Ny evaporator ranomandry herbin dia efa nampiasaina eran'izao tontolo izao.
Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa Herbin dia nanomboka nampiasa firaka volafotsy Chromed hanamboarana ny evaporator nanomboka ny taona 2009 mba hanatsarana ny fitondra-hafanana hafakely evaporator. Ity karazana firaka volafotsy ity dia fitaovana manokana, patantin'i Herbin Ice Systems. Ny fitaovana vaovao dia nanatsara ny fitarihana hafanana tamin'ny 40% raha oharina amin'ireo milina ranomandry flakes sinoa hafa, ary misoroka ny tsy fahatomombanana aorian'ny fampiasana ela be.
Teknolojia milina ranomandry Tube:
Ny rafitra Herbin Ice dia nanomboka nianatra traikefa tamin'ny milina ranomandry Vogt fantsona nanomboka ny taona 2009.
Nividy P34AL efa niasa izahay tamin'ny 20 Jolay 2009 tamin'ny zavamaniry Xiaobang Ice (Zavamaniry ranomandry lehibe indrindra any Shenzhen). Nesorinay ny masinin-dranomandry fantsom-boasary, ary nakaninay ny singa tsirairay avy, toa ny talen'ny rano, ny sensor amin'ny haavon'ny rano ao anaty evaporator, ny rafitra compressor solika compressor, ny rafitra famatsian-dronono marani-tsaina, ny valizy faneriterena tsy tapaka, ny rafitra mahomby ary ny zava-drehetra.
Miorina amin'ny traikefa Vogt dia nanomboka nanandrana sy nanatsara ny milina ranomaintainay manokana izahay tamin'ny 2010.
Izahay dia lasa mpanamboatra milina fantsom-boaloboka tsara indrindra any Shina tamin'ny 2011.
Teknolojia avo lenta, kalitao avo lenta ary vidiny tsara dia mahatonga ny orinasa Herbin hitombo haingana be amin'ny tsenan'ny milina fantsom-boaloboka.
Sakano ny teknolojia milina ranomandry:
Talohan'ny taona 2009, mifantoka amin'ny masinin-dranomandry misy hadilan-dranomandry izahay.
Nanomboka nanamboatra milina fitehirizana vata fampangatsiahana mivantana izahay hatramin'ny 2010.
Ity milina fanodinana teknolojia vaovao ity dia mamonjy herinaratra, milamina.
Mandritra izany fotoana izany, manome masinina fonosana ranomandry tsara izahay, efitrano misy ranomandry, efitrano mangatsiaka, chillers rano, rafitra rano madio, tombo-kase kitapo, milina fanaovana oram-panala, chillers banga sns sns, Ary tena tsara amin'izany izahay.
Filozofia momba ny asa:
(1) Ny sandan'ny HERBIN fototra: Mamorona sanda ho an'ny mpanjifa ary mamorona tombony ho an'ny fiaraha-monina!
(2) HERBIN dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny "kalitao aloha, ny laza voalohany, ny serivisy aloha", dia hanohy hanavao sy hivoatra, hiezaka hanatsara ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny fitaovana fanaovana ranomandry, ary ho lasa marika fanaovana ranomandry sokajy eran'izao tontolo izao .
Ny milina ranomandry rehetra dia natao ho matanjaka tokoa, ka afaka miaina tsara izy ireo mandritra ny fandefasana avy amin'ny orinasa any amin'ny toeram-pivarotana. Tsy misy vaky fantsona, tsy misy triatra amin'ny faritra lasitra, tsy misy faritra malalaka aorian'ny fandefasana ranomasina iraisam-pirenena sy fitaterana an-dàlana.
Ny milina ranomandry rehetra dia handalo fitsapana 72 ora alohan'ny hanaterana azy ireo amin'ny mpanjifa.
Manome fiantohana mandritra ny 24 volana ho an'ny milina ranomandry rehetra i Herbin.
Manana ekipa serivisy aorian'ny varotra matihanina koa izahay hanampy ny mpampiasa hametraka ny milina ranomandry. Ny serivisy fakan-kevitra an-tserasera dia maimaim-poana mandritra ny fotoana maharitra.
Ny olona ao amin'ny Herbin Ice Systems:
(1) Herbin mpanorina ny orinasa, ary nampiasa ny anarany hiantsoana ilay orinasa izy. Herbin izao dia tale jeneralin'ny orinasa ary manaparitaka ny asa lehibe ataon'ny orinasa momba ny famokarana.
(2) Mike Li dia talen'ny varotra, miandraikitra ny fivarotana ny orinasa ho an'ny tsena sinoa sy any ivelany. Mike dia manana ny traikefa amin'ny varotra amin'ny indostrian'ny milina ranomandry mandritra ny 10 taona mahery, talohan'izay dia nahazo ny mari-pahaizana nahazo diplaoma an'ny HAVC Major tao amin'ny Oniversiten-dranomasin'i Zhanjiang.
Malaza noho ny HAVC Major ao atsimon'i Shina ny oniversite Zhangjiang Ocean.
Fanamarinana ny masinina Herbin Ice.
Ny milina ranomandry Herbin rehetra dia manana ny fanamarinana ny CE, SGS, UL ......
Ny milina ranomainon'i Herbin dia manana patanty maherin'ny 70, toy ny patanty ho an'ny akora vaovao an'ny evaporator ranomandry, milina ranomandry flake, masinina misy ranomandry ary ny sisa.
Firafitry ny orinasa:
(1) Ny sampan-draharahan'ny HERBIN dia misy: Departemantan'ny fampandrosoana, sampan-draharaha mividy, sampan-draharaha famokarana, sampana manara-penitra, sampan-draharahan'ny varotra ary departemanta serivisy aorian'ny fivarotana
(2) Sampan-draharaha misahana ny fampandrosoana: tompon'andraikitra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny milina ranomandry, fanatsarana ny teknolojia ranomandry, fanatsarana ny famatsiana herinaratra sns.
Sampan-draharaha momba ny fividianana: Fividianana kojakoja sy kojakoja mifandraika amin'ny masinin-dranomandry, toy ny compresseur, sambo fanerena, valves fanitarana, condenser, sns.
Sampan-draharaha mpamokatra: tompon'andraikitra amin'ny famokarana masinina gilasy sy fitaovana mifandraika amin'izany.
Sampan-draharahan'ny kalitao: zahao ny kalitaon'ny milina ranomandry. Ary araho maso ny fanjifana herinaratra isaky ny masinina.
Sampan-draharahan'ny orinasa: Amidio amin'ny mpanjifa ny fitaovana milina gilasy mahay
Sampan-draharaha misahana ny varotra aorian'ny varotra: Tompon'andraikitra amin'ny fametrahana, fikojakojana milina gilasy novidina, ary serivisy an-tserasera amin'ny raharaha rehetra momba ny milina fanaovana ranomandry.
Fampahafantarana ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra
Fampidirana ny fitaovana sy ny haitao
Ny orinasa Herbin dia manana lathes kely 3 marindrano, 2 lathes lehibe mitsivalana, milina fantsom-bozaka mandeha ho azy 15, milina fantsom-bokatra 15 tanana, milina fanapahana lovia & famokarana 3, toerana fanasana asidra iray, dobo iray plastika Nickel & chrome, tionelina fitsaboana iray hafanana, iray milina famenoana polyurethane (PU) .........
Ny lathes sy ny mpiasa efa za-draharaha dia manome antoka ireo evaporator ranomandry amin'ny famolavolana tsara indrindra.
Ny fitsaboana hafanana matihanina dia manome antoka fa ny evaporatoran'ny ranomandry dia tsy misy fahasimbana aorian'ny fampiasana maharitra. Ny fanasana asidra lavorary sy ny plastika nikela sy chrome dia mamela ireo evaporator hiasa maharitra mandritra ny 20 taona mahery.
Manana olona mihoatra ny 50 miasa matihanina amin'ny fitaovana voalaza etsy ambony izahay, ary afaka manamboatra setroka eva misy etona 5-20 bebe kokoa isan'andro.
Manana injeniera 2 izahay hampiasaina amin'ny milina fanala flake, injeniera 2 ho an'ny milina ranomandry flake lehibe, injeniera 3 ho an'ny milina ranomandry fantsom-boankazo ary milina ranomandry hafa miaraka amin'ny teknolojia avo lenta.
Amin'ny salan'isa, isan-kerinandro dia handefa milina ranomandry flake mampiasa kapila kely 200 izahay. Masinina misy ranomandry flakes 5-10 lehibe kokoa noho ny 5T / andro. Masinina gilasy misy setroka 3-5 lehibe mihoatra ny 3T / andro.
Herbin dia nanangana fifandraisana matanjaka amin'ireo mpamatsy singa, toa an'i Bitzer, Frascold, Refcomp, Danfoss, Copeland, Emerson, O & F, Eden, sns.
Ny milina ranomandry Herbin dia be mpampiasa erak'izao tontolo izao.
Ohatra, ny 95% an'ny milina fanaovana ranomandry vita avy any Torkia dia misy evaporator ranomandry flakes Herbin ataon'ny orinasa Sogutma eo an-toerana.
65% Masinina ranomandry flake vita sinoa any Shina no fitaovana wtih Herbin evaporator ranomandry.
Ny 30% -n'ny milina fanaovana ranom-boankazo avo lenta any Azia Atsinanana dia avy amin'ny Herbin Ice Systems, toa an'i Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kambodza, Laos .....
Ny fantsom-boaloboka dia lanina ho sakafo amin'ny fiainana andavan'andro any amin'ireo firenena ireo.
80% ny sambo mpanjono sinoa dia misy milina ranomandry flake ranomasina Herbin.
Herbin no mpamatsy milina fanala flake lehibe indrindra ho an'ny Carrefour, Wal-Mart, Tesco, Jiajiayue, ary supermarket Chain hafa. Ny flakes ranomandry dia amidy amin'ny fivarotana hazan-dranomasina, trondro, fihaonana sns.
Ny milina ranomandry goavam-be any Herbin sy ny milina fantsom-boaloboka dia ampiasain'ny Sanquan Foods, Shineway Group, ary zavamaniry fanodinana sakafo hafa.
Ny orinasa Herbin dia manana solontena sy birao any Moyen Orient, Afrika Atsimo, Atsinanana EU, EU Avaratra sns.
1. Fampisehoana vokatra
Mizara ho vokatra farany, vokatra manokana ary vokatra ankapobeny ny vokatra.
(1) Ny vokatra farany: ny vokarinay farany dia milina ranomandry manavotra herinaratra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana vaovao hanamboarana ireo etona misy ranomandry flake dia tsy misy herinaratra 75KWH fotsiny hampihenana herinaratra milanja 1 taonina (miorina amin'ny 30C manodidina sy rano miditra 20C) ny masinin-tsakay. Ny milina ranomandry flakes hafa dia mandany herinaratra 105KWH farafaharatsiny amin'ny fanaovana flakes ranomandry 1 taonina.
Izahay koa dia nanondraka milina ranomandry flake karazana amidy, ary mandany herinaratra 65KWH izy ireo amin'ny fanaovana ranomandry 1 taonina isaky ny salanisa.
(2) Vokatra manokana: Manana vidiny manokana izahay ho an'ny milina fantsom-boasary 5T / andro amin'ny taona 2020. Ary manana an'ity modely ity foana izahay. Afaka mivarotra milina gilasy 5T / andro foana izahay miaraka amin'ny vidiny tsara indrindra eto an-tany, ary ao anaty tahiry izy ireo. Tsy mila 18 andro fotsiny isika amin'ny fanaovana masinina fantsom-boasary 5T / andro vaovao avy amin'ny 0.
(3) Vokatra ankapobeny: milina fanala flake amin'ny varotra ankapobeny dia fahaiza-manao kely ary mitazona milina ranomandry madinidinika kely ao anaty tahiry izahay. Milamina izy ireo ary manana fotoana fanompoana lava be, amidy toy ny alika mafana isan'andro izy ireo.
2. Famaritana ankapobeny momba ny vokatra
Ampiasaina amin'ny masinina kely ny kapila misy ranomandry madinidinika ao amin'ny fivarotana lehibe, trano fisakafoanana mba hihazonana ny sakafo ho vaovao.
Masinina ranomandry flake / fantsom-boaloboka lehibe no ampiasaina amin'ny zavamaniry fanodinana sakafo. Ary ny ranomandry dia ampiana amin'ny sakafo mivantana mandritra ny fanodinana.
Ny milina ranomandry goavambe sy milina fantsom-boasary koa dia natao ho an'ny orinasa mpivarotra gilasy. Ny zavamaniry ranomandry dia mivarotra ny ranomandry flake amin'ny mpanjono, na mivarotra ny fantsom-boaloboka amina kafe / bar / hotely / fivarotana / fivarotana zava-pisotro mangatsiaka sns.
Ny milina ranomaintsika dia be mpampiasa amin'ny fivarotana lehibe, fikarakarana hena, fikarakarana sakafo anaty rano, famonoana vorona, indostrian'ny hoditra, indostrian'ny simika dye, fihenan'ny mari-pana amin'ny toeram-pitrandrahana, fivarotam-panafody, laboratoara, toeram-pitsaboana, fanjonoana an-dranomasina, tetik'asa fananganana beton sns. .
Miaraka amin'ny haitao vaovao indrindra, ny milina fitehirizan-tsofinay dia 30% mihoatra ny masinina ranomandry flakes. Raha misafidy ny milina fanaovana ranom-boasary 20T / andro ny mpampiasa dia handany USD 600000 kely ho an'ny volavolan-dalàna mandritra ny 20 taona izy. Raha misafidy milina ranomandry flakes sinoa hafa izy dia handany USD 600000 bebe kokoa amin'ny faktiora herinaratra ary tsy mahazo na inona na inona izy. Ny kalitaon'ny ranomandry mitovy, sy ny habetsahan'ny ranomandry koa.
Ny milina fantsom-boalobokay dia novolavolaina mifototra amin'ny rafitry ny ranomandry an'ny Vogt. Izy ireo dia manana fifehezana ranon-javatra tonga lafatra ao amin'ny evaporator, famatsian-dronono marani-tsaina, fivezivezena menaka malefaka, rafitra fanosotra mahomby, ary tsy misy vata fampangatsiahana rano miverina amin'ny compressor .........
Ireo asa antsipiriany rehetra ireo dia vita tsara ary hanana milina gilasy fantsona tsara indrindra ianao avy amin'ny Herbin Ice Systems.
Manana milina gilasy misy fenitra sinoa izahay, fenitry ny EU, fenitra USA .....
Ho an'ny milina ranomandry misy fenitra EU sy USA, ny loko tariby dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika CE, ny mpandray rano dia misy valizy fiarovana ary ny valizy dia misy tendrony 2, ny sambo fitifirana rehetra dia misy fanamarinana PED .........
Mba hanomezana toky ny fotoana maharitra fanaovan'ireo masinina ireo dia manolo-kevitra foana izahay ny mpanjifa mba hividy kojakoja miaraka amin'ireo masinina. Ny paompy / motera / sensor / contactors / relay dia misy vidiny tena lafo, mitovy amin'ny ohatrinona aloany amin'ny mpamatsy antsika.
Mametaka milina ranomandry ao anaty boaty hazo mahazatra izahay, izay vita amin'ny takelaka misy fumigated. Izy ireo dia azo ekena amin'ny firenena rehetra manerantany.
Hamafisina tsara ao anaty boaty hazo, na ao anaty kaontenera ny masinina. Hanao am-pitandremana ireo asa ilaina rehetra izahay mba hisorohana ny fahasimbana ateraky ny fikororohana, ny fidona an-dàlana avy any amin'ny oziniko mankany amin'ny toeran'ny mpanjifa.
Ny fefy vy dia hamafisina ary hamafisina tsara ny fantsona. Ny orinasa sinoa hafa dia tsy nametraka velively izany.
Tokony haka sary ny mpanjifa mba hampisehoana ny refy fanerena rehefa avy nandray ireo milina ranomandry. Raha manana olana amin'ny fanapahana fantsona, famakiana, famoahana entona ireo masinina, dia handoa ny very izy ireo.
Adiresy:Sina, Azia Atsinanana